Microloan Providers Need MRSD Approval | Myanmar Business Today
Home Business Local Microloan Providers Need MRSD Approval
Microloan Providers Need MRSD Approval
To provide microloans to government and private-sector employees, microfinance companies need approval from the Microfinance Regulation and Supervision Division (MRSD), the regulator said viaastatement.
Lenders will not need permission to provide microloans to their own employees, but they need to inform the regulator of their loan-granting process.
MRSD’s statement also said that microfinance companies may not ask for recommendation letters from the department whereaborrower works, deduct their salary as loan repayment, or pressure borrowers with loan-default action under the Civil Servant Law and Regulation framework. Furthermore, lenders are required to give government employees and their own employees the same treatment when considering loan applications.
Failure to comply with MRSD instructions will be subject to penalties up to and including license revocation, in accordance with the Microfinance Business Law.
Between 2012 and April 2019, 181 financial institutions registered as microfinance providers.
To tackle the problem of overlapping credit, Myanmar will establishacredit bureau in April tasked with collecting and storing borrowers’ credit history. Microfinance industry stakeholders have pointed out that the problem stems from the lack of formal data on microloans and the fact that the loans are so small.
Myanmar Credit Bureau in December 2018 signed an agreement with Equifax New Zealand Services and Solutions to establishacredit bureau system.
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကို အသေးစားချေးငွေထုတ်ချေးရာတွင် အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ချေးငွေထုတ်ချေးရမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (Microfinance Regulation & Supervision Division-MRSD) သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူမှသာ ချေးငွေထုတ်ချေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကို ချေးငွေထုတ်ချေးပါက အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ တင်ပြရန်မလိုအပ်သော်လည်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြိုတင်အသိပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းပြင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ချေးငွေထုတ်ချေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ထောက်ခံချက် အာမခံချက်ရယူခြင်း၊ ချေးငွေထုတ်ချေးမည့်ဝန်ထမ်း၏ လစာငွေမှပြန်လည် ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းစေခြင်း၊ ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအားဖိအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေအရ ဝန်ထမ်းအား အရေးယူရန် တွန်းအားပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလုပ်ရဟု အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ချေးငွေထုတ်ချေးရာတွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အသင်းဝင်များကို ချေးငွေထုတ်ချေးသကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိရဟု သိရသည်။
ယခုထုတ်ပြန်ထားသည့် အချက်အလက်များကို အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှုမရှိပါက အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဥပဒေပါ စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းများနှင့် အညီလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ သိရသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ဧပြီအထိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း ၁၈၁ ခုရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘဏ်ချေးငွေလျှောက်ထားသူများ၏ ချေးငွေစာရင်းများနှင့် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးနိုင်မည့် ခရက်ဒစ်ဗျူရို တစ်ရပ်သည်လည်း လာမည့် ဧပြီလတွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ်ချေးငွေလျှောက်ထားသူများအကြား ချေးငွေများ အထပ်ထပ်ထုတ်ယူထားသည့်အခြေအနေများကို ထိန်းချုပ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ချေးငွေထပ်ခြင်းများကြုံတွေ့နေရခြင်းမှာ ချေးငွေထုတ်ပေးသည့် ပမာဏနည်းပါးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတွင် လူတစ်ဦးချင်းအတွက် ချေးငွေမှတ်တမ်းထားရှိမှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူများက ဆိုသည်။
မြန်မာခရက်ဒစ်ဗျူရိုစနစ်အတွက် အမေရိကန်အခြေစိုက် Equifax New Zealand Services and Solutions ကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာခရက်ဒစ်ဗျူရိုကုမ္ပဏီ (Myanmar Credit Bureau) တို့ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleRealme Unveils Entry-Level ‘Superstar’
Next articleGrappling with Coronavirus, Tokyo Olympic Leaders Have No Good Options